Accueil > Gazetin'ny nosy > Andry Rajoelina : Potehin’Irmah Naharimamy sy Famindra Justin
Andry Rajoelina : Potehin’Irmah Naharimamy sy Famindra Justin
Manao ny fomba rehetra ahazoana toerana amin’ny fifidianana depiote ao Toamasina ny ekipan’i Irmah Naharimamy. Izy izay efa depiote tany Mahanoro saingy tsy nahafapo ny vahoakan’i Mahanoro ny fomba fiasany ka izao nirotsaka ao Toamasina izao indray.
Anisany toerana ivarotana vary mora ao Toamasina ny tranon’ny depiote teo aloha Famindra Justin sady lisitra faharoa miaraka amin’i Irmah Naharimamy. Manimba tanteraka ny filoha Rajoelina ny zava-misy ataon’ingahy Famindra Justin izay mazava ho azy fa fanapahan-kevitra iarahany amin’i Irmah Naharimamy.
Nomen’i Famindra Justin baiko ireo nampiandreketiny ny fivarotana vary mora ao amin’ny trano fonenany fa izay olona efa fantatra fa manohana ny kandidà Dr Benessy, dia tsy omena vary mora. Nanatanteraka baiko tokoa ireo mpivarotra ka izay olona ao anaty fokontany fantatra fa miara-dia amin’io kandidà laharana faha-3 ao Toamasina io, dia nasaina nody.
Fihetsika izay sady mampiseho hakanosana.
Mbola tsy voafidy akory dia efa hita soritra ireo fizahozahoana sy fihetsika feno fanamparam-pahefana ataon’i Irmah sy Famindra.
Ankoatra ny kandidà Benessy, dia anisany atahoran’ireo kandidà misora-tena miara-dia amin’ny filoha Rajoelina ireo i Tody Arnaud. Maro tamin’ireo mpandraharaha manohana an’i Tody Arnaud no iharan’ny fandrahonana.
Amin’izao fotoana izao, lasibatra amin’ny sotasota fandrovitana afisy ny kandidà Tody Arnaud. Any amin’ny ekipan’i Irmah avokoa ny andehan’ny eritreritra ny mponina ao Toamasina amin’ny sotasota mahazo ny kandidà Tody Arnaud io. Misy olona antsoina hoe Ricky Dinh Van izay tanankavan’i Irmah, efa olona tsy tian’i vahoaka fa tsy sahiny ailika fa mahavita “mission” ampanaovan’i Irmah azy. Efa voatonontonona tamina varotra “espace vert” sy tanin’ny kaominina maro ao Toamasina io Ricky Dinh Van io ary efa zatra mampiasa “gros bras”. Tsy mahagaga intsony ny fahasahiana mandrovitra afisy ataon-dry Irmah amin’ny alalan’ny “gros bras” an’i Ricky Dinh Van. Io fitankosinan’i Irmah Naharimamy amin’i Ricky Dinh Van io no anisany tsy itiavan’i Toamasina azy ka hisy akony lehibe amin’ny fifidianana ny 27 mey.
Potika sy simba tanteraka vokatra ny ataon’ireo olony ao Toamasina ingahy Andry Rajoelina. Izy izay mitazam-potsiny na dia efa maro aza ireo mba niezaka nanao tatitra taminy.
Marc Ravalomanana : Te ho lehiben’ny mpanohitra
Ambalavao : Rongony 2 kitapo tratra tao anaty taxi-brousse
Herisetra ataon’ny mpitandro filaminana : Mampaneno lakolosy ny CINDH sy ny Firenena Mikambana
Fandalovan’ny Papa François : Mpino 6 hetsy avy any amin’ny faritra no ho avy eto Antananarivo
Antananarivo : Maro ny faritra voakasika ny fahapatahan-drano
Fitakiana ny « Iles Eparses » : Mbola ady sarotra ary mila ny firaisan-kinan’ny Malagasy
Tononkalo : NY FONAO
Eglizy Katolika : Nahazo Eveka vaovao ny arsidiosezin’Antananarivo
Depiote : Nahoana no tsy dinihina ny HCJ ?
Toamasina : Manimba ny fihariana ny ampihimamban’ny « HITA »